Fankalazana ny Andron’i Afrika – Sénat de Madagascar
Fankalazana ny Andron’i Afrika
May 25, 2019 RAMBELO Abel NIRINA
Tontosa teny amin’ny Ministeran’ny Raharaham-bahiny ny fankalazana ny faha 56 taonan’ny Vondrona Afrikana sy ny andron’i Afrika izay marihina isan-taona isaky ny faha-25 mey.
Anisan’ny nanatrika izany lanonana fankalazana izany ny Filohan’ny Antenimierandoholona Rivo RAKOTOVAO sy ny Filoha Lefitra Kolo Christophe Roger. Nanatrika ity fotoana ity ihany koa ny Filohan’ny Filankevitry ny Fampihavanana sy ireo mpikambana ao amin’ny Governemanta ary ireo Masoivoho vahiny monina sy miasa eto amitsika.
Ny lohahevitra nosafidian’ny Vondrona Afrikana tamin’ity taona ity moa dia niompana amin’ny « taona ho an’ny mpitsoa-ponenana, ireo nampodiana an-tanindrazana ary ireo voatery nafindra toerana ».
Raha nandray fitenenana Ramatoa Hawa Ahmed Youssouf, mpisolotena manokan’ny Vondrona Afrikana eto Madagasikara, dia nanao jery todika ny tantara ara-politika, ara-tsosialy sy ara-ekonomikan’i Afrika. Nambarany fa ny olona avy any Azia, sy Eraopa no maro mifindra monina kokoa noho ny Afrikana fa tsy araka ny fiheverana azy. 14,1% amin’ny mpifindra monina ihany no avy aty Afrika araka ny tahirin-kevitra navoakan’ny MO Ibrahim ny taona 2018.
Amin’ity taona 2019 ity rahateo no hanatanterahana ny fankalazan’ny Afrikanina ny faha 10 taonan’ny Fifanarahana tao Kampala izay nankatoavina ny 06 desambra 2009. Ity fifanarahana ity moa dia anisan’ny fitaovana hiarovana ireo nafindra toerana sns..
Tsy nohadinoin-dRamatoa Hawa Ahmed Youssouf ihany koa moa ny niresaka ny fifidianana izay ho tanterahina eto Madagasikara. “Mino isika fa hanana Assemblée Nationale hanamafy fototra ny Repoblika sy hiantoka ny fampandrosoana an’i Madagasikara” hoy izy tamin’ny fiteny Malagasy.